Mr Programmer (www.mr-programmer.com): ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များတွင် ငွေအပ်နှံသူများ တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်သာ အပ်ငွေပြန်လည်ထုတ်ယူရမည်
ဂျပန် ဒုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရန်ကုန်သို့လာမည်။
လုံခြုံရေးကောင်စီမှ ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူမှုလုပ်ရ...
ဗိုလ်ချုပ် သန်းရွှေ မိသားစု လာအိုရောက်နေ
Myanmar protest questions and answers
US: Myanmar must end violence against demonstrator...
China issues plea for calm in Myanmar
တစ်ရက်ငါးနာရီအောက် အိပ်စက်သူတွေ နှလုံးရောဂါနဲ့သေဆံ...
သံဃာတော်များ ကို ရိုက်နှုက်ခြင်းသည် သာသနာပြုရာရောက်...
100,000 protest Myanmar junta
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကျနော့်ရဲ့ နိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓကိုစော်ကားခြင်...
ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များတွင် ငွေအပ်နှံသူများ တစ်ပတ်လျှင်တစ်ြ...
မိုက်ကရိုဝှေ့နဲ့ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်အငွေ့ အဆုတ်ေ...
လူသားနဲ့ တိရိစ္ဆာန်မျိုးစပ် သန္ဓေသားလောင်း သုတေသန လု...
ပြေးနေသော ကြယ်တစ်လုံး၏ အမြီးတန်းရှည်ကြီးကိုမြင်ရ
ရန်ကုန်တွင်သရီးဂျီ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အသုံးပြုခွင့်ရ...
Why do they focus only on protests despite there w...
ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များတွင် ငွေအပ်နှံသူများ တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်သာ အပ်ငွေပြန်လည်ထုတ်ယူရမည်
ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များတွင် ငွေအပ်နှံသူများအနေဖြင့် ငွေပြန်လည်ထုတ်ယူရာတွင် တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်သာ ငွေပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ငွေအပ်နှံသူများနှင့်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များမှ သတင်းရရှိပါသည်။
ဗဟိုဘဏ်၏ ညွန်ကြားချက်များအရ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များတွင် ငွေအပ်နှံထားသူများအနေဖြင့် ပြန်လည်ထုတ်ယူရာတွင် တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်သာထုတ်ယူခွင့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှုင့် လာမည့်စက်တင်လာလ ၁၇ ရက်မှစတင်သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တစ်ခုမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။ ယခင်လပိုင်းကလည်း ဗဟိုဘဏ်၏ညွန်ကြားချက်အရ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များတွင် ငွေအပ်နှံသူများအနေဖြင့် အပ်ငွေတစ်ကြိမ်လျှင် ကျပ်သိန်းတစ်ရာသာ လက်ခံလျက်ရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့ဘဏ်မှာ ငွေသွားအပ်တော့တစ်ကြိမ်ကိုကျပ်သိန်း တစ်ရာအများဆုံးပဲလက်ခံတယ်။ ငွေပြန်ထုတ်ရင်လည်း တစ်ပတ်မှာ တစ်ကြိမ်ပဲထုတ်လို့ရတော့မယ်လို့ ဘဏ်ကပြောပါတယ်။
ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ကစပြီး တစ်ကြိမ်ပဲထုတ်လို့ရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ထုတ်တဲ့အခါကိုယ်လိုသလောက်ထုတ်လို့ရမယ်လို့ ဘဏ်ဝန်ထမ်းကရှင်းပြပါတယ်” ဟု ငွေအပ်နှံသူတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တစ်ခုမှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကလည်း“ကျွန်မတို့ ဘဏ်အနေနဲ့ကတော့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လက်ရှိမှာအပ်ငွေကို ပမာဏကန့်သတ်လက်ခံနေပါတယ်။ အပ်ငွေကို တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ပဲထုတ်ပေးရမယ်ဆိုတာက စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့မှစမှာပါ” ပြောပြပါတယ်။
လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်လည်း ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များမှ သိရှိရသောသတင်းများကြောင့် စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်မှ ၁၄ ရက်အတွင်း လုပ်ငန်းသုံးစရိတ်လုံလောက်သည်အထိ ပြန်လည်ထုတ်ယူမှုများပြုထားရကြောင်းလည်း လုပ်ငန်းရှင်များကဆိုသည်။
“စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့စမယ်လို့ သိရတော့လုပ်ငန်းလည်ပတ်ငွေ လုံလောက်အောင် ထုတ်ထားရတာပေါ့။ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ဆိုတော့ ငွေအလုံအလောက်ထုတ်ထားပေမယ့် ရုတ်တရက် ငွေလိုလာတဲ့အခါ အခက်အခဲနည်းနည်းတော့တွေ့နိုင်ပါတယ်” ဟု လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကသုံးသပ်ပါတယ်။ှ
Posted by Mr. Programmer at 9/17/2007 09:38:00 PM
Declaration From Myanmar Youth Technicians Group
Our group isagroup of young peoples who are living inside and outside of Myanmar.
Most of us are students and also some are working as professional. We have some small
knowledges in the field of computer networking, computer programming, web developing,
electronic and telecommunication field.
To disturb the websites and blogs those related with junta's media, the public media
and business organisations those related and supported the junta of Myanmar.
To hack the computer systems of goverment's official and the business organisations
those related to junta. Depend on the chance, we will destroy or change the data inside the server.
To send the emails involve with dangerous virus program to top goverment officers and
To distrub the communication between the phone lines of goverment offices.
The junta destroy the dream of all young peoples and educated peoples. They are trying
to make all the people to become non educated except the supporters of theirs. But there
arealot of higly burmese educated peoples who working as professional inside and ouside of
Myanmar. We request all the burmese people to share yours Knowledges, Technologies and
Experiences to against the junta of our country. All of you can share publicly via blogs or
news websites and also you can email to mytechnicians@yahoo.co.uk . Also we understand that
mostly all of the burmese educated people has better knowledges and expreiences than us and we
like all of you to share your knowledge and also like you to distrub to the goverment computer
system by individually. We also like to have the informations about goverment official website,
the email address of top goverment members and their family members, the location of servers
and about the security software system that they are using.
Lets revenge the stupid goverment
Lets show the abilities of Educated People to those Non Educated Junta
Lets help the citizen of Myanmar
Give respect to the monks and people who are opposing and asking the goverment for good of
Myanmar Youth Technicians Group (MYTG)